Apple Pay amin'ny tranonkala dia manomboka manomboka amin'ny tranokala samihafa | Vaovao IPhone
Apple Pay amin'ny tranonkala dia manomboka manomboka amin'ny tranokala samihafa amin'ny fanombohana ny iOS 10
Alejandro Cabrera | | iPhone, About us
Ny iOS 10 dia misy ny fanohanana ny Apple Pay amin'ny tranonkala, mamela ny mpampiasa hanao fividianana tranonkala izay mampiasa serivisy fandoavam-bola Apple ary miaraka amin'ny Touch ID ho fanamarinana ny dian-tànana. Izao dia efa azon'ny besinimaro i iOS 10, ny tranonkala sasany dia nanomboka nanohana ny Apple Pay mivantana amin'ny asan'ny tranonkala.
Nanambara ny Time Inc. androany fa afaka mampiasa Apple Pay ny mpanjifany izao hividy famandrihana amin'ireo andiany magazine, ao anatin'izany ny Sports Illustrated, People, Entertainment Weekly, ary Real Simple.
Tamin'ny herinandro lasa teo, ny mpivarotra antsinjarany Wayfair dia nanambara ny fanohanany ny Apple Pay amin'ny tranokala, manome ny mpiantsena safidy handoa amin'ny fanaka an-trano sy ny vokatra ho an'ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Apple. Apple, mazava ho azy, dia manaiky Apple Pay ao amin'ny tranonkalany ihany koa.
Ny serivisy fandoavam-bola an'ny Apple dia tafiditra ao amin'ny Big Commerce, Shopify, Stripe, ary Squarespace ihany koa. Nanambara ny fanampiana an'i Apple Pay amin'ny tranonkala, manome ny mpivarotra kely fomba mora hanaiky ny fandoavan'ny Apple handoavana ny fividianana.
Amin'ny herinandro ho avy dia tokony hahita ny Apple Pay manomboka mihodina amin'ny tranonkala marobe isika, manome ny mpanjifa safidy hafa amin'ny serivisy fandoavam-bola efa misy, toy ny PayPal. Miaraka amin'i Apple Pay, ny fiantsenana dia azo atao amin'ny fikitihana tokana, ary tsy ilaina ny mampiditra ny carte de crédit na ny antsipirian'ny fandefasana. Apple Pay koa dia azo antoka, mitazona ny laharan'ny karatra sy ny mombamomba anao manokana tsy ho azon'ny mpivarotra.
Rehefa navoaka ho an'ny besinimaro ny macOS Sierra ny talata ho avy izao, Apple Pay amin'ny Internet dia ho hita amin'ny Mac ihany koa. Toy ny amin'ny Apple Pay amin'ny iPhone, ny valiny dia hohamarinina amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny iPhone 6 na taty aoriana, ary koa ny Apple Watch.
Araka ny lazain'i Apple, ny Apple Pay an'ny macOS Sierra amin'ny tranokala dia ho azon'ny mpanjifa rehetra manana Mac afaka mitantana ny rafitra fiasa Sierra.
Amin'ny finday, Apple Pay amin'ny tranonkala dia misy amin'ny iPhone 6 ary avy eo, iPad Pro, iPad Air 2, ary iPad Mini 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple Pay amin'ny tranonkala dia manomboka manomboka amin'ny tranokala samihafa amin'ny fanombohana ny iOS 10
Spotify dia manambara ny fahatongavan'ireo mpampiasa vola 40 tapitrisa
Avereno jerena ny fomba fijerin'ny AirPods sasany amin'ny mainty manjelatra